01-17-2011 11:45 AM #21
udkvif;udk aus;ZL;wifyg\_ nu [EGdKif;udk a&mufygw,f? rdk;csKyfawmh wufpD awGudkvnf; &SmrawGU jzpfaew,f? tJ'D tcsdefrSm tJhydkY wufpD u'fjym; jy jyD;vlwa,muf u olvdkufydkUay;r,f qdkvdkY vdkufvm vdkufw,f? um;em; a&mufawmhrS um;rSm bmwHqdyfrS rygrSef;odw,f? tJ'Dvluvnf; avqdyfeJY [dkw,fudk 1 em&Davmfu armif;&r,f ajymawmhrS rsufvHk;jyK;jyD; [dkcsDrif;u Arm oli,fcsif; qD qufawmhrS tJhavmuf a0;rSef;odw,f
um;ay:rSmvJ wufpD orm;awGu tvdrftaumuf odyfr&Sdbl; qdkwJh ydkYpfudk uref;uwef; zwfxm;rdawmh eJeJ pdwfat;oGm;w,f
&moDOwkuawmh at;vdkufwm 0Dac:aeayrJh? &IyfaewJh qdkifu,fawGom z,fvdkuf&if Oa&my a&mufaewJh cHpm;csufrsdK;cHpm; &rSm trSefyJ ? tvkyfeJY vmwm ayrJh reufu tcsdef& vdkY vrf;avQmuf xGufwm vrf;rjzwf &JvdkY jyefvSnfhvm&w,f? [dkcsDrif; xuf ydkqdk;ovdkyJ qdkifu,fawG &rf;um;wm
nuawmh at;vGef;vdkY taEG;xnf3xyfawmif tdyfvdkY r&vdkY a[mfw,fudk heater awmif;rdawmhrS olu tJuGef;udk adjust vkyfay;vdkufw,f? awmfao;yg&JU
abya, aprilboy, daylight, hngetsoe, mokenlay, mrlynn, orjawlan, RunAtServer, sai naw, sunny007, talkyboy, thatonthu, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-17-2011 01:23 PM #22
နောက်ဆုံးနေ့ မှာတော့ တက်စီသမား လူလိမ်နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဗျို့။ နည်းနည်းတော့ သတိထား။ ဖြစ်ပုံက လိုပါ။
မပြန်ခင်နေ့ညဘက် ညဈေးတန်းကို သွားဖို့ရာ တက်စီငှားစီးတယ်။ ဟနွိုင်း မြို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ညဈေးဆိုတော့ တက်စီသမားတိုင်းသိမှာဘဲဆိုပြီး ခါတိုင်းလို လိပ်စာရေးမှတ်ပြီးယူမလာမိ၊ မြေပုံစာရွက်လည်းယူမလာမိဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ တက်စီသမားကeလိုမတတ်ပါ။ ရုတ်ဆွအဆုံး နိုက်မားကက် ဆိုတဲ့ စကားကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အိုကေ အိုကေ ဆိုပြီး ခေါင်းငြိမ့်တယ်ခင်ဗျ။ ကားပေါ်ရောက်မှ ဗ လိုလျှောက်ပြောတော့တာဘဲ။ အသိ ဗ တစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူတို့အချင်းချင်းပြောခိုင်း တော့မှသိတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် မြို့ထဲဘက်ကို မမောင်းဘဲ လေဆိပ်ဘက်က ပတ်မောင်းတယ်ချင်ဗျ။ ကိုက မြေပုံကိုအတော်သင့်ကြည့်ထားပြီးသားဆိုတော့ ဒီကောင်တော့ ငါ့ကို လုပ်နေပြီးဆိုတာသိလိုက်တယ်။ နောက်တော့မှ မြို့ထဲဘက်ကိုမောင်းပါတယ်။ ခါတိုင်း ကိုနေတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ မြို့ထဲကို တစ်သိန်းလောက်သာ ကျတဲ့ခရီးစဉ်ကို ၁သိန်းခွဲအထိ မီတာတက်နေပေမယ့်မရောက်သေးပါ။ စိတ်လည်းတိုလာတာနဲ့ ရောက်တဲ့နေရာမှာဆင်းပြီး နောက်ထပ် တစ်စီးပြောင်းစီးဖြစ်တယ်။ အဲဒီ တက်စီသမားက ပိုဆိုးနေတယ်ချင်ဗျ ။ မြို့ထဲ ဧရိယာမှာဘဲပြစ်နေလို့ ၁၀ မိနစ်လောက်သာမောင်းလိုက်ရတဲ့ ခရီးစဉ်ကို တစ်သိန်း ခုနှစ်သောင်းကျတယ်ဗျ။ မီတာကိုမဟုတ်တရုတ် လုပ်ထားမှန်း ၊ လိမ်နေမှန်းသိသိ ကြီးနဲ့ ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူး။ ကိုပြောတာလည်းနားမလည် ဘယ်ကိုမှလည်းလှမ်းတိုင်လို့မှမရ။ ဆွဲထိုးချင်စိတ်ကို အတော်ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ရတယ်။ ညဈေးမှာ ဈေးဝယ်ပြီးပြန်တော့ ဟိုတယ်လိပ်စာကပ်ပြားပြပြီး မောင်းခိုင်းတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ၈၉၀၀၀ ဘဲကျတယ်ဗျာ။ အဲဒါ သတိထားအုံးဗျ။
အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင် လိပ်စာ၊ လမ်း သေချာမှတ်ပြီးမှသွားပါ။ မြေပုံစာရွက်ထုတ်ပြီးဆောင်ထားတာအကောင်းဆုံးဘဲ။ ခရီးတစ်ခုမသွားခင် ဂူးဂယ်မှာအရင် စနည်းနာပြီးမှသွားတာအကောင်းဆုံးဘဲ။ တံဆိပ်မပါတဲ့ တက်စီ၊ ကားမှန်တွေကို စတစ်ကာကပ်ထားတဲ့ တက်စီတွေမစီးပါနဲ့။ ကားပေါ်တက်ခင် လိပ်စာပြပြီးသွားတတ်တယ်ဆိုမှ သွားတာအကောင်းဆုံးဘဲ။ ဗ တွေအတော်များများက ဘာပြောပြော ခေါင်းတညိမ့် ညိမ့်နဲ့မို့ ဘာမဆိုသေချာမေးမြန်းပါဗျို့။။။။။။။.
Last edited by mrlynn; 01-20-2011 at 01:37 AM.
abya, aprilboy, daylight, gugunge, hngetsoe, k-pooh, koshwemung, mokenlay, nakamura, orjawlan, RunAtServer, sai naw, talkyboy, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-17-2011 01:36 PM #23
ဟနွိုင်း ညဈေးပါ။ အဝတ်ထည်၊ အိတ် ၊ ဖိနပ်၊ အားကစားဝတ်စုံ၊ အိမ်အသုံးဆောင် ပစ်စည်း၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီး သာရေပိုက်ဆံအိတ်၊ သားရေခါးပတ်၊ ဗ ရိုးရာ လက်မှုပစ်စည်း၊ ဗ ရိုးရာ လမ်းဘေးအစားစာ ( စူးစမ်းပြီးစားချင်သူတွေအတွက်ပါ )။ တခြား စုံစီနဖာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ နေ့တိုင်း မဖွင့်ပါ။ တစ်ပတ်မှာ သောကြာ၊ စနေ ၊ တနင်းဂနွေ သုံးရက်သာဖွင့်တယ်။ ညနေ ၇ နာရီလောက်မှာမှ ဆိုင်တွေကခင်းကျင်းပြီး ၉ ရာရီ ၉ ခွဲ လောက်ဆို တချို့ဆိုင်တွေကသိမ်းပြီ။ မြင်မိသလောက် အားလုံးက တရုတ်ဖြစ်တွေများတယ် (အတုတွေလို့ထင်တာဘဲ ဟီး ) ။ ဒါပေမယ့် ဒီညဈေးက တရုတ်ပစ်စည်းက စလုံးကိုဝင်တဲ့ ပစ်စည်းလောက်တော့ အရည်သွေးကောင်းတယ်ဗျ။ ဈေးကတော့ ထက်ဝက်လောက်သက်သာတယ်။ ဒါပေမယ့် ပစ်စည်းတိုင်းကိုမဆိုလိုပါ။ ပရီးမီးယား လိတ် အသင်းကြီးတွေရဲ့ တံဆိပ်ပါတဲ့ အားကစား ဝတ်စုံတွေကတော့ အမှန်လောက်နီးနီးကို ကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုသွားတဲ့ညက လီဗာပူး အင်္ကျီရှာမတွေ့။ လီဗာပူး သားရေပိုက်ဆံအိတ်ဘဲ တွေ့လို့ဝယ်လားသေးတယ် ဟီး ။ ကိုတည်းတဲ့ ဟိုတယ်ဟာ မြို့ထဲမှာဘဲဆိုရင်တော့ ညဈေးကို လမ်းလျှောက်သွားရုံနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ညဈေးမှာတိုး နေကြတဲ့လူအများစုက ကောင်မလေးတွေများတယ်။ ကိုရွှေကျုပစ်တို့ ဗ ရောက်ရင်လက်မလွတ်တမ်း သွားပေရော့ဗျာ။
Pho Dong Xuan, Pho Hang Duong & Pho Hang Ngang; Old Quarter
လမ်းထိပ်က ကော်ဖီဆိုင်ပေါ်ကမြင်ရတဲ့ ညဈေးတန်းအဝင်
ဗီယက်နမ် ရိုးရာ ယွန်းထည် ၊ ယွန်းပန်းချီ နှင့် စဉ့်အိုးနှစ်လုံး
Last edited by mrlynn; 01-17-2011 at 01:42 PM.
abya, aprilboy, daylight, GreenHat, hngetsoe, k-pooh, koshwemung, mokenlay, nakamura, orjawlan, RunAtServer, sai naw, sunny007, talkyboy, ttaswo, vodafone, ZuKa
01-18-2011 10:03 AM #24
ဟနွိုင်းလေဆိပ်ပါ။ အလာတုန်းက ညဘက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ အခုရိုက်လာတာက Departure Gate ပါ။ ကျနော်စီးမယ့်လေယာဉ်က စလုံးကိုသွားမယ့် ဗိယက်နမ် အဲးလိုင်းဖြစ်လို့ ကောင်တာနံပါတ် ၂၅\_၂၆ မှာတန်းစီရပါတယ်။ အခြားလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ဆိုရင် ကောင်တာနံပါတ် တူချင်မှ တူပါမယ်။ လေဆိပ်က သိပ်ပြီးမသားနားပေမယ့် သိပ်လည်းမစုတ်ပါ။ ခရီးဆောင်အိတ် အတွက်မှတ်ပုံတင်ဖို့ရာ Computer System Error ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီး ၂၅ မိနစ်လောက် ရပ်စောင့်နေရတယ်။ လေဆိပ်မှာရောင်းတဲ့ လက်ဆောင်ပစ်စည်းဆိုင်တွေဟာ မြို့ထဲကဆိုင်တွေထက် ၄၀ % လောက်ဈေးပိုတင်ထားတတ်တယ်။ လေဆိပ်ကဆိုင်တွေက တစ်ခွန်းဆိုင်တွေပါ။ မရောင်းရရင်နေပစေ ဈေးလုံးဝမလျှော့ပါ။ ဒါကြောင့် အပြန်လက်ဆောင်ပစ်စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင် မြို့ထဲမှာတင် တစ်ပါးတည်းဝယ်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်။
အဓိက သတိပေးချင်တာက ကိုယ်တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ လေဆိပ်ကိုအပြန်မှာ တက်စီဖိုး VND ဘယ်လောက်ချန်ထားရမလဲ။ USD ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတာ သတိပြုစေချင်လို့ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း တက်စီသမားတွေက VND ဘဲလိုချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ဟာ မြို့ထဲဧရိယာဖြစ်နေရင် လေဆိပ်အထိ တစ်နာရီစွန်းစွန်းမောင်းရတဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် လမ်းဖြတ်ခ VND 10000 အပါဝင် စုစုပေါင်း VND 350,000-400,000 (USD 15-20 )လောက်ကျပါမယ်။ မြို့သစ် ဧရိယာ Grand Plaza Hotel နားလောက်ကဆိုရင်ဖြင့် နာရီဝက်လောက်မောင်းရတဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် လမ်းဖြတ်ခ VND 10000 အပါဝင် စုစုပေါင်း VND 250,000-270,000 (USD 13- 14 ) လောက်ကျပါမယ်။ VND ဆောင်ထားတာအကောင်းဆုံးပါ လေဆိပ်ရောက်မှ USD ပေးတဲ့အခါ တက်စီသမားက မယူဘူး VND ဘဲပေးပါဆိုရင် ငွေလှဲရတဲ့အတွက် သူ့အတွက်အလုပ်ရှုပ်နိုင်တယ်။ ကားပေါ်မတက်ခင်ကတည်းက USD သာပေးမယ် အဆင်ပြေလားမေးပြီး ပြေမှလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ VND ဆောင်ထားရင်တော့ သိပ်စကားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့။
နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာက တကယ်လို့ မြို့ထဲကနေ လေဆိပ်ကိုသွားမှာဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း နေရာတကာမှာ လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်လေ့ရှိလို့ အနည်းဆုံး အချိန်တစ်နာရီခွဲလောက်တက်စီပေါ်မှာတင်ကြားသွားနိုင်ပါ တယ်။ ကဲ ပိုတာ လိုတာဖြည့်ကြပါဦး။
aprilboy, GreenHat, hngetsoe, k-pooh, koshwemung, mokenlay, nakamura, orjawlan, parkye, RunAtServer, sai naw, sunny007, thatonthu, ttaswo, ZuKa
01-22-2011 02:23 AM #25
oGm;&if;vm&if; VND jywfoGm;&ifb,fvdkvkyfrvJ ¿
wpf&uf jrdkhxJavQmufoGm;&if; aiGjywfoGm;w,f/ vufxJrSm USD awGbJusefw,f/ tJ'gaiGvSJzdkh qdkifvdkuf&Smwm awmfawmfeJhrawGhyg/ a&TqdkifrSmvSJvdkh&rSef;rodao;yg/ pvkH;rSmvdk Money Changer qdkifav;awG&Sdrvm;vdkhvdkuf&SmwmrawGhyg/ 'geJh bPfawGrSm vnf;&if&edkifaumif;yg&JhqdkjyD; tvG,fawGhwJh bPf ( Techcom Bank vm; Techno Bank ) emrnfrrSwfrdawmhyg)rSmbJ0ifar;vdkufawmh &w,fwJh/ 'gayr,fh USD bJvSJvdkh&w,f pvkH; a':vmjyawmh edk;edk; wJh/ aps;uawmh tjyifaygufaps;xuf enf;ygw,f/
aemufwpfenf;u aiGjywfoGm;&if udk,fhrSm&SdwJh ( Credit Card ^Debit Card ) eJhay;vdkh&ygw,f/ ae&mwdkif;udkrqdkvdkyg/ qdkifay:rSm rlwnfygw,f/ pm;aomufqdkifwpfqdkifrSm pdwfjudkufpm;aomuf&if; aiG&Sif;zdkh Bill awmif;awmh aiGravmufawmhyg/ nbufqdkawmh b,frSmvSJ&rSef;vnf;rodjzpfaewmeJh um'feJhay;vdkh&vm;ar;awmh &w,fwJh/ 'gayr,fh Card Provider Company ujzwfwJh 3% udk qdkifurcHbJ 0,folqDujzwf,lygw,f/ yHkrSefu um'ftokH;jykjyD; aiGvufcH,lwJh vkyfief;&Sifuay;&rSmyg/ ckvdk Customer bufuay;&wmawmh odyfrw&m;bl;xifwmbJ/ Oyrmajym&&if 100 wefypfpnf;wpfckudk 103 ay;jyD;0,f&awmhwmygbJ/aemufjyD; udk,ftokH;jykwJhbPfuvnf; 0efaqmifc,lr,fxifwmbJ/
aemufxyf wpfenf;u wcsdkh ATM Machine awGrSm VND xkwfvdkh&w,fAs/ pufwdkif;awmhr[kwfbl;/ AD,uferfrSm&SdwJh bPftay:rSmrlwnfw,fxifwmbJ/ [dkw,fem;rSmwif ATM Machine eSpfckawGhwmrSm AGRI BANK pufrSmbJ&w,f/ wjcm;pufwpfvkH; emrnfrrSwfrdawmhyg/ VND odef; 20 xkwf&mrSm 0efaqmifctjzpf VND 20000 ( 1 USD cefh ) ay;&ygajumif;/ ydkwm vdkwmjznfhjuygOD;/
Last edited by mrlynn; 01-22-2011 at 02:47 AM.
badinf, GreenHat, hngetsoe, jokershan, k-pooh, koshwemung, Lady, mokenlay, nakamura, orjawlan, RunAtServer, sai naw, ttaswo, ZuKa
01-26-2011 05:21 AM #26
ခုဆို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အတော်များများ ဗီယက်နမ်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားရတာတွေများလာပါပြီ။ အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့ ကျားပေါက်တစ်ကောင်အဖြစ်တင်စားထားတဲ့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ တိုးတက်မှုဟာ အမှန်တိုင်း အရှိတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံထက် သာလွန်လို့သွားပါပြီ။ ရှင်းရှင်းပြောတော့ တို့တွေ ကျန်ခဲ့ရပြန်ပီပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဗီယက်နမ်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားရတဲ့ မြန်မာတွေဟာ ပညာရှင်အဖြစ်သွားရတဲ့အတွက် လက်မထောင်နိုင်လို့ ဒီတစ်ခုတော့ ဖြေသာပါရဲ့ဗျာ။ (ကျွန်တော်ကဖြင့်အလည်သက်သက်သာ)။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းတော့ မရေးတတ်လို့မရေးတော့ပါ။ ဒါပေသိ သူတို့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်းအပေါ်ဘယ်လောက် ရိုသေလေးစားတယ်ဆိုတာတော့ မြင်သလောက်ပြောပရာစေ။ နေရာတိုင်းမှာ " ဟိုချီမင်း " ပုံကိုတွေ့ရတယ်ဗျာ။ ငွေစက္ကူမှာလည်း " ဟိုချီမင်း " ကျောက်တိုင်တွေမှာလည်း " ဟိုချီမင်း "၊ အဆောက်အုံ ကြီး/ငယ်/ရွယ်၊ ဈေးဆိုင်အပါဝင် အို.. နေရာတကာတွေ့ရတာပါ။ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံကိုမသွားခင်ကတော့ ကွန်မြူနစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံဆိုပြီးနှာခေါင်းရှုံ့ မိသေးတယ်။ သူတို့ နိုင်ငံ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးအပေါ် ရိုသေးလေးစားချစ်ခင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာ တော့ စိတ်ထဲ လေးစားမိတာတော့အမှန်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လောက် ရိုသေလေးစားတယ်ဆိုတာပြောပြစရာမလိုပါ။ သို့သော် ........။သို့သော်........။
Temple of Literature လိပ်စာက - Van Mieu - Quoc Tu Giam, Dong Da, Hanoi, Vietnam
ဝင်ကြေးက - VND 5,000
ဟနွိုင်းမြို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို အဓိကဆွဲဆောင်ရာတစ်နေရာဖြစ်တယ်။ အဝင် မုင်္ဂအပါဝင် အဆောက်ဦးတော်တော်များများက ပြင်ပြီးသားလို့ထင်တယ်။ အနီးကပ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ လက်ရာကြမ်းပြီး အသစ်တွေဖြစ်နေတယ်။ အားလုံးဟာ တရုတ်ဟန်ဖြစ်လို့ တရုတ်ဘုံကျောင်းတစ်ခုထဲရောက်နေသလိုခံစားရမယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ် ဝါဒအခြေခံပြီးသင်ကြားတဲ့ ဒီကျောင်းတော်ကြီးကို ၁၀၇၀ ခုနှစ်မှာ ဘုရင် Ly Thanh Tong ကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၁၀၇၆ ခုနှစ်မှာတော့ စစ်မက်ရေးရာနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ် မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပို့ချရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Tran မင်းဆက် (1225-1400) ၊ Le မင်းဆက် (1484 -1780) အထိအဆက်ဆက် ကျောင်းတော်ရာအဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့တယ်။ မူလကျောင်းတော်ရာဟာ ကွန်ဖြူရှပ်မွေးဖွားရာ တရုတ်ပြည် ရှန်ဒေါင်း (Shandong) ကျုဖု (Qufu ) အရပ်က ကွန်ဖြူးရှပ် ကျောင်းတော်ရာပုံစံကို ယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုကိုတော့ နည်းနည်းစမ်းစစ်ဖို့လိုပါမယ်။ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ လောက် ခေတ်အဆက်ဆက် အသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် ပြုပြင်မှုပေါင်းအကြိမ်ကြိမ်အခါခါ လုပ်ခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ ရှေးလက်ရာအတိုင်းပါလို့ပြောနေပေမယ့် ယုံရခက်ခက်ရယ်။
ကျောင်းတော်ရာအဝင် ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်စီမှာ ကျောက်စာရုံတွေဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ကျောက်စာအားတိုင်အားလုံးဟာ အရွယ်စားကြီးမားတဲ့ ကျောက်သားလိပ်ကျောကုန်းပေါ် မတ်မတ်ထောင်တင်ထားဟန်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း ၈၂ ခုရှိပါတယ်။ ယခင်မူလ အရည်အတွက် ၁၇၇ ဖြစ်တယ်လို့သိရတာကြောင့် ပျောက်ပျက်ကုန်တယ်ထင်ပါရဲ့။ လီမင်းဆက် (Le Dynasty, 1484 - 1780 ) ဘွဲ့ရရှိတဲ့ စာတတ်အကျော်မော်ပေါင်း ၁၃၀၆ ယောက်တို့ ရဲ့ နာမည်၊ အရပ်ဒေသ၊ ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ထူးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ .
လိပ်ကိုယ်ထည်ကကျောက်သားဟာ ကျောက်စာချပ်က ကျောက်သားနဲ့အရောင်မတူတဲ့အတွက် ဒီနှစ်ခုထဲက တစ်ခုဟာ မူလလက်ရာမဟုတ်။ လိပ်ကျောကုန်းပေါ်ထောင်ထားတဲ့ ကျောက်စာအထက်ပိုင်းဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ဟန်အတိုင်းဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ထွင်းထုထားတာတွေ့ရတယ်။ ကနုတ်ပန်း ၊ နဂါး ၊ ကြိုးကြာ ၊ ကြက်တူရွေးလို့ထင်ရတဲ့ ငှက်တစ်မျိုး ၊ နေ ၊ လ စတာတွေကို အတွေ့ရများပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းမှာ ခေါင်းစဉ်ဆန်ဆန်ရေးထားတဲ့စာဟာ တရုတ်ရှေးဟောင်းစာဖြစ်ဟန်တူတယ်။ သို့သော်ကိုယ်ထည်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာဟာ ခေတ်သစ်စာတွေများလားမပြောတတ်ပါ။ စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ ကျောက်ပြားပေါ်ထွင်းထုထားတဲ့ စာလုံးကောက်ကြောင်းဟာ ဇောင်းနက်ပြီ ပြတ်သားလွန်း( Sharp and Clear ) နေတဲ့အတွက် ပြုပြင်ကိုင်တွယ်မှု (Restoration)တွေလုပ်ထားဟန်တူပြီး နဂိုမူလ ရှေးဟောင်းပုံစံအတိုင်း ဟုတ်ဟန်မတူပါ။ ပြန်ပြီးဆက်ထားတဲ့ ကျောက်စာချပ်တစ်ခုတည်းမှာမှ ကျောက်သားရောင်မတူတဲ့ အပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရတဲ့အတွက် အစားထိုးထားဟန်တူတယ်။ နောက်ပြီး တချို့စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေဟာ ပြင်ထားဟန်တူတယ်။ ကွန်မြူနစ်အစိုးရလက်ထက်ရောက်မှ လုပ်ခဲ့တာလားဆိုပြီး သံသယဖြစ်မိတယ်။ တချို့ကျောက်စာပေါ်က စာတွေဟာ သမိုင်းကိုဖျောက်လိုတဲ့အတွက် ဖျက်ထားဟန်တူတယ်။
တိုးဂိုက်တွေကတော့ အဲလိုဖျက်ထားတဲ့စာလုံးတွေတွေ့ရတာကတော့ " ကျောက်စာထွင်းသူတွေဟာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှားသွားတဲ့အတွက် ပြန်ဖျက်ထားတာလို့ ရှင်းပြနေတာကြားရတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘာလို့ ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင် ဖျက်ထားတဲ့စာလုံးဟာ တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစမဟုတ်ဘဲ အတွဲလိုက် စာလုံး ၈ လုံးကနေ ၃၂ လုံးလောက်အထိ တိတိကျကျဖျက်ထားတဲ့အတွက် မရိုးသားတာအမှန်ဘဲ။ မလိုချင်တဲ့ လူ ၊ ဒါမှမလိုချင်တဲ့ အချက်လက်တွေကို ကွတ်ပြီးဖျက်ဖြစ်တာပါဘဲ။ အံ့ဩစရာမလိုပါ။
ဗီယက်နမ် ကျောင်းသားလူငယ်အများစု စာမေးပွဲနီးတဲ့အခါ ဒီကျောင်းတော်ကိုလာပြီး ကျောက်စာ ၊ ကျောက်စာကိုထမ်းထားတဲ့လိပ်ရဲ့ ဦးခေါင်းစတဲ့နေရာတွေကို ကိုင်ပြီးဆုတောင်းကြတယ်။ အောင်အတိတ် အောင်နမိတ်ယူတဲ့သဘောထင်ပါရဲ့။ ရာထူးခပ်ကြီးဖြစ်ဟန်တူတဲ့ စစ်ဝတ်စုံဝတ် အရာရှိတစ်ယောက်ကတော့ဖြင့် လက်ထဲမှာ စာရွက် ၃ ရွက်နဲ့ မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ထားပြီး သူ့တပည့်တွေကို စကားတွေအများကြီးပြောနေလေရဲ့။ စာရွက်ထဲက တရုတ်ရှေးဟောင်းစာလုံးတွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းတူတဲ့ ကျောက်စာတိုင်တစ်ခုကိုတွေ့သွားဟန်တူပါတယ်။ သူ့တပည့်တွေကို ဩဝါဒပေးပြီးနောက်မှာတော့ ကျောက်စာရှေ့ကိုသွား ၊ မှတ်စုစာအုပ်ကိုဖွင့် ၊ အကောင်းစားဘောလ်ပင်ကို အကျနကိုင်ပြီး သဲသဲမဲမဲလေ့လာနေဟန်လုပ်ပြီး ပါလာတဲ့ တပည့်တစ်ယောက်ကို ဒေါင့်ပေါင်းစုံကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းပါတော့တယ်။ ဟန်ရေးတပြပြနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ ကိုယ်တော်ကြီးကတော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်လို့ သူနဲ့ဝေးရာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆောင်းတန်းက ကျောက်စာရုံတွေဆီကို ခြေဦးလှည့်ရပါတော့တယ်။
ဒီဘက်ဆောင်းတန်းရောက်ပြီးအေးအေးလူလူ ဓာတ်ပုံရိုက် ဒီဇိုင်းတွေအနီးကပ်ကြည့်နေတုန်း ဗြုန်းဆို အရိပ်မဲကြီးတစ်ခုက အနားကပ်လာပြီး ဗ လိုပြောတယ်ခင်ဗျ။ ဘယ်သူများလဲမှတ်တယ် စောစောက အရာရှိကြီးဖြစ်နေရော။ လက်ထဲမှာစာရွက်တစ်ရွက်ကိုင်ထားပြီး သူကိုင်ထားတဲ့စာရွက်နဲ့ တူမတူတိုက်ကြည့်နေရင်းကနေ ကျွန်တော့်ကို ဗ လိုမေးနေပါတယ်။ သူ့ကိုင်ထားတဲ့ စာရွက်ကိုယူကြည့်တော့ ကျောက်စာနမူနာစာရွက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီစာရွက်ကို ဘယ်လိုရတာလည်း ၊ ကျောက်စာမှာဘာတွေရေးထားတာလည်း E လိုမေးတော့ " ဘိုင် " " ဘိုင် " ဆိုပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့် လုပ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုမေးတာကိုနားမလည်ပါလားလို့ သဘောပေါက်တယ်။ ဒါလည်း အံဩစရာမဟုတ်တော့ပါ။
ရေအိမ် သွားတဲ့လမ်းမှာ အရွယ်စားခပ်ကြီးကြီးကျောက်ပြားကျိုးနှစ်ချပ်ကို နံရံနားကပ်ပြီး ထပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒိအပေါ်မှာ အပိုင်းကျိုး ၃-၄ ခုတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ကျောက်စာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အပေါ်ကအကျိုးပဲ့တွေကို လှန်ကြည့်တဲ့အခါ ထင်တဲ့အတိုင်း တရုတ်ရှေးဟောင်းစာလုံးတွေပါတဲ့ ကျောက်စာဖြစ်နေတယ်။ မူလကျောက်စာချပ် ၁၇၇ ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင်ရှေးပစ်စည်းကို ဘာလို့ ဒီလိုချောင်ထိုးထားသလဲဆိုတာမပြောတတ်ပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်တက်တဲ့ သဘောမို့ အဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါ။
ကျောက်စာရုံတွေကြည့်ပြီးလို့ သစ်သားကျောင်းဆောင်ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်တယ်။ ဒီကျောင်းဆောင်ရဲ့ အစိတ်ပိုင်းအများစုဟာ လောလောလတ်လတ်ပြုပြင်ထားဟန်တူပါတယ်။ စေ့စေ့ကြည့် ရေးရေးပေါ်ဆိုသလို ခေါင်းမိုး၊ ထုတ်တန်း ၊ မုဒ်ဦးဒီဇိုင်း ၊ သစ်သားပေါ်က ယွန်းလက်ရာပန်းချီ စတာတွေဟာ သစ်လွန်နေတယ်။ နတ်ကွန်းက ကဗျည်းတိုင်တွေဟာလည်းဘဲ အသစ်တွေ ။ နတ်ကွန်းအဆောင်တွေကတော့ ၁၉ ရာစုလက်ရာတွေလို့ထင်တယ်။ သိပ်အဟောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါ။ အဝင်လမ်းကို မျက်နှာမူထားတဲ့ ပထမဆုံးနတ်ကွန်းရဲ့ရှေ့မှာ လိပ်ကျောပေါ်တက်ရပ်နေတဲ့ ကြိုးကြာငှက်ပုံ ကြေးရုပ်နှစ်ခုတွေ့တယ်။ ရှေးလက်ရာမဟုတ်ပါ။ ဗီယက်နမ်က " Temple " အများစုမှာ လိပ် နှင့် ကြိုးကြာပုံတွေကို မကြာခဏတွေ့ရတယ်။ ကျောင်းတော်တစ်ခုမှာတော့ စာရေးစုပ်တန်ကိုက်ထားတဲ့ လိပ် အဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ သစ်သားပန်းပုလက်ရာကိုတွေ့တယ်။ စာပေ ပညာရပ် ၊ ပညာရှိ ၊ ပညာတတ် စတာတွေကို ဖော်ကျုးရာမှာ လိပ် နှင့် ကြိုးကြာ အသုံးပြုကြတာများဟန်တူတယ်။ သို့သော် စားသောက်ဆိုင်တွေမှာတော့ လိပ်အရှင်ကောင်တွေကို ပုံးထဲထည့်ပြထားပြီး ဝယ်သူတွေကလည်း နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် မှာယူစားသောက်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက် ဘာသာရေးနှင့်တော့ သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ မှတ်ချက်ချမိတယ်။ သဘာဝတောရိုင်း သတ္တဝါတွေကိုကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေဘယ်လိုရှိတယ်မသိပေမယ့် မကြာခင် လိပ်မျိုးတုန်း မှာအမှန်ဘဲ။
ဒီလိုနဲ့ Temple of Literature လေ့လာရေးခရီးစဉ်ပြီးဆုံးလို့ လမ်းဟိုဘက်ချမ်း ကပ်ရက်မှာရှိတဲ့ " Fine Art Museum " ဘက်ခရီးဆက်ခဲ့တယ်။
Hanoi ရောက်ရင်တော့ ဝင်လည်လိုက်ပါဦး။
Last edited by mrlynn; 01-26-2011 at 06:07 AM.
GreenHat, hngetsoe, jokershan, k-pooh, koshwemung, Lady, mokenlay, nakamura, orjawlan, RunAtServer, sai naw, sunny007, ttaswo, ZuKa
01-27-2011 07:09 AM #27
jokershan, k-pooh, koshwemung, Meursault, mokenlay, orjawlan, RunAtServer, sai naw, thatonthu, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-27-2011 07:13 AM #28
ကျောင်းတော်ရာအဝင် ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်စီမှာ ကျောက်စာရုံတွေဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ကျောက်စာအားတိုင်အားလုံးဟာ အရွယ်စားကြီးမားတဲ့ ကျောက်သားလိပ်ကျောကုန်းပေါ် မတ်မတ်ထောင်တင်ထားဟန်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း ၈၂ ခုရှိပါတယ်။ ယခင်မူလ အရည်အတွက် ၁၇၇ ဖြစ်တယ်လို့သိရတာကြောင့် ပျောက်ပျက်ကုန်တယ်ထင်ပါရဲ့။ လီမင်းဆက် (Le Dynasty, 1484 - 1780 ) ဘွဲ့ရရှိတဲ့ စာတတ်အကျော်မော်ပေါင်း ၁၃၀၆ ယောက်တို့ ရဲ့ နာမည်၊ အရပ်ဒေသ၊ ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ထူးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
jokershan, k-pooh, koshwemung, Meursault, mokenlay, murphy, orjawlan, RunAtServer, sai naw, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-27-2011 07:22 AM #29
Last edited by mrlynn; 01-27-2011 at 09:22 AM.
jokershan, koshwemung, Meursault, mokenlay, murphy, orjawlan, RunAtServer, sai naw, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-27-2011 08:52 AM #30
daylight, jokershan, koshwemung, Meursault, mokenlay, murphy, orjawlan, RunAtServer, sai naw, thatonthu, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa